Zambia: miresaka mikasika ny famotsorana ny vadin’ny filoha teo aloha ny vahoaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Desambra 2010 4:45 GMT
Nahazo rariny tamin'ny Fitsarana avo i Regina, vadin'ny filoha faharoa Zambiana Frederick Chiluba, izay naiditry ny fitsarana ambaratonga voalohany am-ponja telo volana lasa izay noho ny fiampangana dimy amin'ny tsy nanaovany fanambarana mikasika ireo vola sy fananany noahiahiana ho toy ny halatra tanaty raharaha nahavoa ny firenena.
Nilaza ny mpitsara telo samihafa ao amin'ny Fitsarana Avo izay nanao fanadihadiana azy tamin'ny 7 Desambra 2010 fa tsy misy porofo milaza fa halatra ny fananany sy ny volany na azo tamin'ny tsy rariny. Ny famotsorana an-dRamatoa Chiluba dia manaraka koa ny famotsorana ny filoha teo aloha izay miteraka resabe, nampangain'ny lehilahy izay nanankinany ny fahefana, Levy Mwanawasa, taty aoriana , ho nagalatra ny harem-pirenena.
Notoriana noho ny heloka maro mifandray amin'ny fanamparam-pahefana sy halatra vola be avy amin'ny kitapom-bolam-panjakana i Chiluba vadiny, ary indrindra ny ankamaroan'ny mpanolotsaina amboniny, anisan'izany ny lehibe ao amin'ny tafika sy ny manam-boninahitra amin'ny sampana mpanangom-baovao ary ireo tale mpanatanteraka nitazona orinasa niara-niasa tamin'ny fanjakana. Voaheloka ny ankamaroan'izy ireo ary misy aza ny efa nanefa ny saziny tany am-ponja na eo am-piandrasana ny fampiakarana ny raharahany amin'ny fitsarana ambony.
Nitarika tsikera maro avy amin'ny mpamaky ny famotsorana an-dRamatoa Chiluba tao amin'ny tranonkala roa sangany amin'ny haino amanjerim-bahoaka Zambiana : Lusaka Times sy ny Zambian Watchdog.Tamin'ny fotoana nanoratana ity, dia tsikera miisa 151 no hita ao amin'ny Lusaka Times ary 88 kosa ao amin'ny Zambian Watchdog.
Andeha hatomboka amin'ny tsikera avy amin'i Lusaka Times. Manontany tena i Donkey raha natao ho an'ireo manana ny fahefana io rafi-pitsarana any Zambia io:
Ba Kolwe ama [these monkey] Mila atomboka fantenana tsirairay ny mpitsara. Amin'izay tsapan-dry zareo fa tsy misy fahefana, tsy misy lalàna, afaka miaro ny toetra ratsin'izy ireo. Gadraina 15, 25 taona ny mahantra noho ny heloka madinika, nefa ireo amin'ny sokajy ambonimbony dia tena miriaria mora foana nefa nanao heloka goavana be. Fa karazana fahamarinana inona izy ity? Fa angaha an'ny mpitondra irery ihany ny fitsarana ? Raha ny mpanankarena sy ny mahavita manafosafo ny lamosiny ihany no avotan'i Banda, dia iza ary no hanavotra ny kely indrindra ao amin'ny fiarahamonina? Raha mandresy ny MMD amin'ny fifidianana amin'ny herintaona, dia mety hisy ny fanonganam-panjakana. Tsy hoe kilalao no ilazako izany fa izay ihany no làlana tokana ivoahan'i Zambia amin'izy ity. Fa na iza na iza mandray ny fahefana amin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana, dia tokony hanadio haingana sy hanala ireo mpanao politika rehetra, amin'izay tsy hiverina amin'ireo lalan-dratsiny taloha intsony i Zambia . Ho hita eo ny tohiny fa rahampitso koa mbola andro!
milaza i mj :
Voalohany, navotsotra ny olo-meloka tena gaigilahy. Olo-meloka hafa indray no navotsotra vao haingana . Olo-meloka hafa (i Al Bashir mpamono olona) no nasaina aty amin'ny firenentsika . Izay no milaza ny tantara.
Ny mpisolovava irery ihany no nahazo voka-tsoa tamin'ny ady atao amin'ny kolikoly tany Zambia nandritra ny 10 taona lasa , hoy i Diamond milaza :
Ity aloha no tena mahaliana. Raha ny tena marina, ahoana moa no ahafahan'ny mpanenjika hitaraina noho ireo halatra ireo raha ireo zavatra nangalarina aza tsy voatatitra any amin'ny polisy akory na mitondra porofo ny zava-misy marina fa tena halatra izy ireo? Anjaran'ny ekipan'ny mpitory ny manaporofo fa tena meloka ny olona ampangaina fa tsy anjaran'ny mpiaro ny toriana ……. izay no antony mahatonga ny ampangaina afaka mangina raha tiany. Mitovy amin'ny antsoina hoe tena ny mpisolovava no nahazo tombontsoa tamin'ny ady tamin'ny kolikoly nandritra ny 10 taona lasa (mitovy ny mpitory sy ny toriana ) ……..
Toy ny hanihany ny rafi-pitsarana Zambiana , hoy i Reader:
Tena kivy mihitsy angamba ny mpanenjika mitondra ireo tranga ireo eny amin'ny fitsarana. Misy mpanao politika ve eo amin'ny antokon'ny fitondrana na naman'ny antokon'ny fitondrana izay nantsoina noho ny heloka bevava ka noelohina noho izany? Toy ny mananihany ny rafi-pitsarana Zambiana. Nisy olona niresaka mikasika ny Lehiben'ny Fitsarana niara-nisakafo tamin'ireo olona ireo ve? Ahoana moa ny olona no hanantena fitsarana tsy mitanila amin'ny toe-javatra toy izany? Iza no afaka mametraka ny fitsipika arahana mikasika ireo zavatra ireo? Afaka manampy antsika ve i LAZ? Ary tokony hamela ity lehilahy nahazo sazy 20 taona noho ny halatra bisikileta ity i chi RB.
Tsy manohana izany hevitra izany i Senior Citizen :
I Zambia no manana rafi-pitsarana matihanina tena mahaleo tena izay tsiriritin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny tany miteny anglisy fatratra. Izay no antony mahatonga ireo firenena hafa hanatona an'i Zambia ho fanampiana ireo lahy sy vavy mipetraka ery ambony dabilio. Hitantsika ireo atidoha Zambiana mpanao lalàna teo amin'ny sezan'ny IC, tany Namibia, Kambodza, Kenya, Gambia, Liberia, Sierra Leone, ary Roanda raha tsy hilaza afa-tsy izay. Hitantsika ihany koa ireo Zambiana izay miasa toy ny talen'ireo foibem-piofanana mikasika ny lalàna, Zokiolona sy mpampianatra any amin'ireo firenena sasany izay antony mahaisika antsika sy mampandroso ny rafitsika. Tena fitsarana marina mihitsy tamin'ny Ministra Gladys Nyirongo nogadraina nefa tsy nahazo rariny raha nampiakatra ny raharaha, toy izany koa tamin'ny nanagadrana an'i Emmanuel Mwamba, ny namotsorana an'i Michael Sata, ny namafàna ny sazy ho an'i Kabwela , ary nogadraina daholo ireo Jeneraly rehetra afa-tsy ireo matihanina rehefa mipetraka ny fandresena ara-drarin'ny FJT haaah!
Tsy azo omena tsiny ny mpitsara, hoy i Saint:
Tsy azo omena tsiny eto ny mpitsara. Tsy tokony ho nandramana MIHITSY ity seho ity TALOHAn'ny trangan'ny Dr Chiluba. Tsy afaka manafaka an'i Regina ny mpitsara satria efa nisy ny tranga voalohany nilaza hoe nandray entana halatra izy. Vantany vao voaporofo fa halatra ny entana dia tokony ho mandeha avy hatrany ny fanamelohana. Raha jerena ireo tranga maro mikasika ny fitoriana eo amin'ny trangan’ i Dr Chiluba, dia mahatsiaro aho hoe na tsy manana ny saina manara-dalàna intsony ilay mpisolovava na tsia (‘lawyer wa ma lawyer’) na tiany hoe avotsotra i Dr Chiluba satria manamaivana ny kolikoly hihitatra tsara mihitsy ho amin'ny telovolana voalohan'ny Levi. Res ipsa loquitur.
Ity no antsoina hoe toeram-piompiana!:
Nandray entana halatra ianao na tsia, inona no izy? Fihetsiketsehana miharo hadisoana niniana natao ary tena mampalahelo. Ny tena manohina ahy dia rehefa ny mponina mahantra no mamboly marijuana mba hahazo ngwees kely na rehefa mahantra noana no mangalatra akoho na tahon-katsaka vitsy, dia alefa any am-ponja izy ireo mandritra ny fotoana maharitra! Nefa kosa mandritra izany afaka maimaina fotsiny amin'izao ireo mpanankarena fotsy vozon'akanjo. Tena toeram-piompiana mihitsy tokoa.
Toy ireto manaraka ireo ny fanehoana fihetseham-po ao amin'ny Zambian Watchdog:
Milaza i msana wanzili fa na dia navotsotra aza ramatoa iny, faly ny Zambiana noho fahafaham-barakany:
Mihevitra izy fa tsy ho avy mihitsy izao andro izao. Mahafantatra isika fa tsy maintsy ho afaka izy fa farafaharatsiny aloha isika faly fa afaka ny barakany.
Hoy i Clement:
Diso teo amin'ny lalàna ny fitsarana ambaratonga voalohany rehefa hita ilay izy hoe……………………….. , ka hovakiana ny didy ho an'i Regina. Indrisy fa nanjary ity no fenitra harahina ho an'ireo trangan'olona ambony mitovy amin'izay any Zambia. Ny zavatra tokana mba tsara tamin'izy ity dia mba nitondra fialamboly ny raharaha mikasika azy. Raha ny tena marina, ahoana moa no hitazonana azy raha toa ka nafàhana ilay olona heverina fa nanome entana halatra azy? Mandeha miadana foana ny marina fa mahatratra eny foana izy na dia efa maty efa ela aza ianao.
Milaza i Analyst fa mifangaro voraka ny zavatra rehetra:
Tena mifanipaka be ny didin'ny fitsarana ambaratonga voalohany sy ny fitsarana ambony na dia porofo iray ihany aza no samy nojerena, na dia avy amin'ny sekoly iray ihany aza ireo mpitsara. Tsy hay intsony hoe aiza no aleha. Alaivo sary an-tsaina ary hoe olona tsy mahavita mampiakatra ny raharaha, mety higadra telo taona izy raha ny didy avoakan'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Nahoana??????????????
Hoy i THE JACKAL:
Iza no miraharaha izay lazain'ny mpitsara manaotao foana any. Fantatr'izy ireo fa manaotao foana izy ireo ary mbola hanaotao foana. Tsy Zambiana izy ireo ary miandry ny fijaliana hahazo azy ireo amin'ny hoavy isika!! Manafaka ireo olona ireo ny rehetra ary adinon'izy ireo fa olona maro no maty satria mangala-bola izay tokony natao hanomezana fanafody any amin'ny hopitaly sy any amin'ny klinika i ka-chiluba. Tsy te halahelo izay mpitsara maty aho – tsy mendrika ny fanajako izy ireo… Afaka mankany amin'ny afobe izy ireo.
Miteny tsy am-pihambahambana aho:
Olan'ny didy sy ny fanamelohana baikoan'ny ara-politika izany. Eo amin'ny trangan'ny heloka bevava, tsy mila ahiahy mivaingana intsony hoe tena nanao heloka tokoa ve ny olona iray. Na izany na tsy izany, izay no Zambia ho antsika.
Manao toy ny mpanolotsain'ny filoha teo aloha, Rupiah Banda sy ny antoko mpitondra MMD ny filoha amin'izao fotoana izao. Miatrika asam-panjakana ihany koa izy izay mbola tsy natrehany mihitsy nandritra ny fito taona nahateo amin'ny fahefana an'i Levy Mwanawasa.
Hanao fifidianana ny Zambiana amin'ny herintaona hifidy filoham-pirenena voavao sy mpikambana amin'ny parlemanta fa efa hita sahady hoe iza no ho lany na ho voafidy indray raha ny fahitàna ny fivoaran'ny lalàna sy ny ara-politika miteraka resabe eto amin'ny firenena ireto.